Ghọta R na CRM | Martech Zone
Naanị m ka m na-agụ ezigbo ọkwa na CRM Echere m na e nwere otu nnukwu, oke, oghere na-eme ka ọtụtụ CRM mejuputa… Mmekọrịta.
Gịnị bụ mmekọrịta?
mmekọrịta chọrọ a njikọ ụzọ abụọ, ihe na-anaghị adịkarị CRM ọ bụla. Ihe CRM niile bụ isi dị n'ahịa na-arụ ọrụ dị egwu maka nbudata data - ma ha anaghị eme ihe ọ bụla iji mezue akaghị. Ekwenyere m na nke a bụ isi ihe kpatara ọtụtụ mmejuputa CRM ji daa. Ekwenyere m na ọ bụ njikọ kachasị ike na ọtụtụ nyiwe CRM.
A kọwara CRM
Otu anya na nyocha Google nke Njikwa mmekọrịta ndị ahịa ị ga-ahụ na onye ọ bụla na-ere ahịa na-akọwa CRM n'ụzọ doro anya n'ihe gbasara ike sọftụwia ha. Iji maa atụ, lee Nkọwa nke Salesforce:
Enwere ike ịchọta nkọwa kachasị mfe, nke kachasị na aha ya: CRM bụ ụzọ zuru ezu iji jikwaa mmekọrịta gị na ndị ahịa gị? gụnyere ndị ahịa? maka abamuru na ogologo oge. Karịsịa, sistemụ CRM nke oge a na-enyere gị aka ijide ozi gbasara mmekọrịta ndị ahịa yana ịjikọ ya na ọrụ ọ bụla metụtara ndị ahịa yana akara data.
Hmmm… Echere m na ọ bụghị ihe ndabara na usoro Salesforce na-etolite gburugburu data ijide na njedebe nwere ikike mwekota siri ike. M ka na-eche na ọ bụ ọkara nke ihe ngwọta CRM.
Nkera nke ọzọ nke ihe ngwọta dị na otu I si ejikọ onye ahịa gị. CRM gị kwesịrị ịdabere na isi ihe na-ebute iji buo amụma, ka ị nwere ike, oge ị kwesịrị ime ihe na mmekọrịta gị na onye ahịa gị. Kedu ka ị si akwado ndị ahịa gị site na ndụ ahịa ndị ahịa?
Ihe Nlereanya nke Bara Uru CRM Mmejuputa
Ọ bụrụ na ọ bụ atụmanya, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị nwere mmasị na nkwukọrịta gị ma ọ bụ na weebụsaịtị gị (nchịkọta nchịkọta)? Kedu mgbe ha na-atụ anya na ị ga-akpọtụrụ ha ọzọ? Have nwere alerti melite iji gwa gị mgbe ịkpọtụrụ ha ma ọ bụ Nde ozi ịntanetị ndokwa?
Ọ bụrụ na ọ bụ atụmanya ma ọ bụ onye ahịa, ọdịnaya weebụ gị ọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha nyere mmasị ma ọ bụ na ị rere ha? Echere m Amazon.com na-arụ nnukwu ọrụ na-atụ aro akwụkwọ maka m - mana ha na-eleghara eziokwu ahụ anya na m na-azụ ahịa na Barnes na Noble, kwa. Ọ bụrụ na ha agbakọta Adịghị or Ezi Kwuru n'ime akaụntụ m, ha ga-ama ihe m zụtara na agaghị egosi m ya ọzọ.
Established gosiputala uru nye onye ahịa gị nke ị nwere ike mezie? Ọ bụrụ na mụ na gị nọ ọtụtụ puku dollar, olee otu i si emeso m ihe karịa ndị na-anaghị eme ya? M na-aga nnukwu ụlọ ahịa kọfị na mpaghara m nke na-agbanye m obere obere oge mgbe m nwetara onye na-ajụ ase. Ha maara m n’aha ma mata na m bara uru karịa ha karịa ndị ahịa na-egosi otu ugboro n’ọnwa.
You chọpụtala mgbe ihe na-akpata bụ ka ndị mmadụ nọrọ ma ọ bụ hapụ gị? Ọ bụrụ na onye na-agụkarị akwụkwọ ozi email gị mepee 5, pịaghị, wee wepu aha gị, gịnị ka ị na-eme dị iche na akwụkwọ akụkọ 5 maka onye na-agụ akwụkwọ na-agatụbeghị?
Kedu oge ikpeazụ ị kelere ha ma ọ bụ rịọ ka ha zaghachi na ọrụ gị? Have na-emefu ọnụ ụzọ ma ọ bụ ọnụ ụzọ ọrụ emebere iji gwa ndị ahịa na-emefu $ X ma ọ bụ zụọ ahịa ụbọchị X ọ bụla, izu ma ọ bụ ọnwa?
Chedhazi oge, ozi ịntanetị kpatara, ụgwọ ọrụ, na ọdịnaya dị ike bụ ihe ndị dị mkpa na maintaining na-enwe mmekọrịta gị na onye ahịa gị ma na-enyere ha aka site na ndụ ndị ahịa. Lelee ngwa CRM gị ọzọ… kedu ka o si enyere gị aka ime nke ahụ? Ekwesighi ịhapụ gi ka ịmepe mmekọrịta gị niile na CRM gị. Ọ bụrụ na ọ bụ, ị nweghị usoro CRM, ị nwere ebe nchekwa data ndị ahịa.
Nchịkọta, ụgbọ ibu azụmahịa, Email Marketing na Sistemụ Njikwa Ọdịnaya Weebụ ga-agwakọta maka gị ka ịnwe CRM mmejuputa nke ga-erite uru zuru oke na ọnụ ahịa na mbọ mbụ achọrọ iji wuo mmejuputa CRM. Ọ bụrụ na i meghị jikọọ ntụpọ, ị nweghị azịza CRM.
IHE: Mgbe m mere a search maka CRM ego na ezi eserese na weebụ, m hụrụ oké akụ, na Onye Ozizi Azụmaahịa.
Tags: CRMmmekọrịta ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịatozuru okennyocha ngwaahịatozuo ndummekọrịtanhazi mmeghachi omumeusoro ire ereSlider
Gịnị Engines Enjuru Read
Jenụwarị 28, 2008 na 7:13 PM
Echere m n'eziokwu na ọtụtụ usoro CRM kwesịrị ịkpọ nke ọma usoro PRM n'ihi na ha abụghị maka Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa kama kama gbasara Njikwa Mmekọrịta Mmekọrịta Ọkachasị ebe anyị anaghị echegbu onwe anyị banyere iso RELATIONSHIP na onye ọ bụla. Emepụtara ọtụtụ n'ime sistemu ndị a maka ndị dinta ma ndị na-achịkọta ha ma n'ezie adabaghị maka atụmatụ 'ala ma gbasaa' nke na-achọ ka e wulite mmekọrịta na-adịgide adịgide.
Emere usoro CRM maka ijikwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke "ndị ahịa" na iwulite mmekọrịta nwere ike ịme nke ọma mgbe anyị tụlere itinye uche siri ike na obere ndị ahịa.
Ikwuru eziokwu, ihe kpatara ya bụ na e wughi sistemụ CRM ndị a maka ebumnuche ejiri ha.
Jan 29, 2008 na 3: 46 AM
Ma eleghị anya, ị ga-abụ ihe ziri ezi na-akpọ ha “Atụmatụ Njikwa Atụmatụ“, Ma ọ bụ“PMS”Na nkenke. Kinda nwere mgbanaka na-atọ ọchị na ya, mba? '-)
Jan 29, 2008 na 6: 40 AM
U kwuru ya, ọ bụghị m
Jan 29, 2008 na 3: 31 AM
Isi ihe. Site na ọtụtụ nhọrọ dị mfe maka ụlọ ọrụ ịmalite iso ndị ahịa na-emekọrịta ihe n'otu ọkwa, enweghị ihe ngọpụ ịghara ime (facebook, blọọgụ, email).
Companylọ ọrụ ọ bụla na-eji CRM, iji ya eme ihe nke ọma nwere ike bụrụ atụmatụ bara uru nke ụlọ ọrụ gị na-enye, yana ihe niile dị na mkpịsị aka gị.
Jenụwarị 29, 2008 na 10:59 PM
Ka m na-ede blog banyere oge azụ, ọtụtụ na-eji CRM 'ịgha' atụmanya ha kama ịmepụta mmekọrịta ha na ha.
Jan 30, 2008 na 10: 31 AM
Ọ bụ na ndị ọkaibe CRM a anaghị echeta etu ọ dị mgbe ha na-eme mkpapụ?
Ọ bụghị echiche niile dị n’azụ CRM na-ewulite mmekọrịta na-adịgide adịgide? Yabụ, olee mgbe ịchụ nta na-enwe mmekọrịta? Olee ihe m na-eme ụlọ ọrụ ndị na-egosi ihe ha ‘ma’ banyere m? Kpọmkwem, bye-bye.
Gịnị bụ azịza ya? Jụọ m, sonye m, na-akpali mmasị ma na-akpali m, iju m ma mee ka m nwee mmetụta pụrụ iche. Chei, nke ahụ siri ike.
Kedụ ka ụlọ ọrụ na-enwetaghị ya? Ha na-atụ ụjọ ịjụ? Egwu nke ịjụ?
Nri echebara echiche: ọ bụrụ na enweghị m mmasị, ị gaghị achọ ịchọpụta n'oge na-adịghị anya? Yabụ ị nwere ike ilekwasị anya na ndị nwere mmasị?